Abstract: Shandira pamwe, Shanduro, uye Handoff Yako Chigadzirwa Dhizaini | Martech Zone
Tiri kushanda nekambani yenyika izvozvi kugadzira tsika yekushambadzira Cloud emaema matemplate kune yega yega madhipatimendi uye zvikamu zvebhizinesi. Nekuti vanobatana, makondirakiti, uye vagadziri vese vari kure, mugadziri akagadzira ake mockups uye akashanda pamavhezheni neboka rake rehutungamiriri - ndokuzvipa kuchikwata chedu kuti chiteerere coding uye kuitisa.
Dhizaina akandizivisa kuna Abstract. ngovepo chishandiso chekudyidzana pamhepo cheMac uko kambani yako, makondirakiti, uye vatengi vanogona kubata, vhezheni, uye dhizaini dhizaini munzvimbo imwechete.
Ongororo ye Abstract
Kugadzirisa kana kugadzira dhizaini dhizaini, iwe uchafanirwa kudaro dhawunirodha iyo macOS desktop app. Kugovera uye kuwana mhinduro, iyo desktop application inowirirana ne Abstract's webhu webhu.
Iyo Abstract Workflow Maitiro
Abstract inogonesa timu yako kushanda kubva kuna tenzi, bazi, kushandira pamwe, kupa mhinduro kwese nzira kuburikidza nekugadzirira yako inogamuchirwa chigadzirwa dhizaini yekugadzira.
Tumira - kupinza Sketch uye Adobe XD mafaera uye ipapo gadzira nzvimbo yepakati yeyako yepamusoro-to-date dhizaini basa uye anotsigira zvinyorwa.
Shingairira - Tanga kuongorora nekugadzira bazi kubva kuna tenzi kugadzira munzvimbo dzakaenzana dzekushandira. Matavi inzvimbo dzakachengeteka uko iwe nevamwe vagadziri munogona kushanda pane iwo mafaera panguva imwe chete, musina kunyora pamusoro pebasa remumwe neumwe kana kukanganisa tenzi.
Commit - Gwaro uye chengetedza rako basa uine akawedzera mamiriro, kuvaka zvinyorwa sezvaunoenda. Kusanganisira zvinyorwa nezve zvawakaita uye nei chiri chikamu chekuchengetedza basa rako mu Abstract.
Feedback - Kumbira mhinduro kubva kune vamwe vagadziri uye vanobatika, zvakananga pabasa. Makomendi uye zvirevo zvakanyorwa pamaartboard kuti zvive nyore kutarisa.
mhando - Mushure mekugadzirwa kwatenderwa uye kugadzirira kuenda kumberi, danho rinotevera kusanganisa, kana kuwedzera, shanduko dzako kuita tenzi. Iwe unogona kuenzanisa akasiyana mavhoribhodhi emabhodhi usati wafunga kuti ndedzipi shanduko dzaunoda kuchengetedza kumatenzi uye ndedzipi dzausingade. Uye, kana iwe ukachinja pfungwa dzako kana kuita chikanganiso, iwe unogona kugara uchikungurukira kuiyo yapfuura vhezheni.
Production - Shanduko inoshanda kubva dhizaini kuenda kune budiriro yakananga kubva kuAbstract. Vagadziri vanogona kuenzanisa shanduko, tarisa zviyero, uye kurodha midziyo - zvese kubva kune chinongedzo. Kuona kwevaoni ndiko kwese kwavanoda (uye mahara).
Abstract inopa zvese zvakajairwa uye zvinopa mukati zvipo.
Tanga Yako Yemazuva gumi-Abstract Muedzo Rongedza Enterprise Abstract Demo
Tags: ngovepoadobe xdpatanidhizaini mhinduromockupchigadzirwa chigadzirwachigadzirwa dhizaini mhinduroSketchuiui mhinduromushandisi interface dhizainishanduro control
Infographic: MaSocial Networks Anokanganisa Sei Hupenyu Hwedu